Home » Lahatsoratra farany farany » People » Tale vaovao ao amin'ny Explore Minnesota Tourism
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao
Ny governoran'i Minnesota Tim Walz dia nanambara androany fa i Lauren Bennett McGinty dia ho Talen'ny Explore Minnesota.
Ny governora Walz dia nanendry an'i Lauren Bennett McGinty ho Talen'ny Explore Minnesota Tourism.
Lauren dia manana traikefa amin'ny varotra, fifandraisana, fampandehanana, fitantanam-bola, fampiantranoana, fanabeazana ary fisoloana vava ao amin'ny fikambanana tsy mitady tombony any Minnesota.
Ny 15 Novambra 2021 no andro voalohany an'i Lauren ao amin'ny Explore Minnesota Tourism.
Ny governoran'i Minnesota Tim Walz sy ny governora lietnà Peggy Flanagan dia nanambara androany ny fanendrena an'i Lauren Bennett McGinty ho talen'ny Tsidiho ny fizahan-tany Minnesota, manomboka ny 15 Novambra.
"Minnesota dia iray amin'ireo toerana tsara indrindra ho an'ny mpandeha manerana an'izao tontolo izao mitady hijery ny hatsaran-tarehy voajanahary sy ny vondrom-piarahamonina mavitrika," hoy ny governora Walz. “Faly aho manendry an'i Lauren ho ny Jereo ny talen'ny fizahan-tany Minnesota, izay hitondrany ny fahaizany amin'ny varotra mba handraisana anjara amin'ny mponina sy hisarihana mpitsidika sy talenta vaovao ho an'ny fanjakanay. "
"Minesota dia fonenan'ny hatsarana, ny fanavaozana ary ny fahafahana mankasitraka ny tanànantsika mavitrika sy ny harena voajanahary mahafinaritra," hoy ny governora Lieutenant Flanagan. "Faly izahay fa i Lauren no mitarika Tsidiho ny fizahan-tany Minnesota ary manampy amin'ny fiantohana ny olona avy amin'ny fiaviana rehetra sy ny sarangam-piainana rehetra hahatsiaro ho faly sy ho raisina an-tanan-droa hijery ny toetsika manentana ny fanahy.”
“Faly izahay mandray an'i Lauren ho mpitarika ny fanjakana. Ho mpitarika tsara ho an'ny Explore Minnesota izy, ”hoy ny Kaomisera Steve Grove, Departemantan'ny Fampiroboroboana ny Asa sy ny Toekarena (DEED). "Manantena ny fiaraha-miasa aminy sy ny ekipa lehibe ao amin'ny Explore Minnesota izahay mba hanafaingana ny fanarenana ara-toekarena ho an'ny indostrian'ny fizahan-tany miavaka any Minnesota."
“Voninahitra ho ahy ny mandray an'io andraikitra lehibe io satria ny indostrian'ny fizahantany dia manohy miasa amin'ny lalana mankany amin'ny valan'aretina. Rehefa miatrika fanamby amin'ny lalantsika mankany amin'ny ara-dalàna vaovao isika, dia mila mitady fomba famoronana hifandraisana amin'ireo mpandeha an-tongotra sy interstate, ”hoy i Lauren Bennett McGinty. "Manolo-tena hihaino ny filan'ny mpiara-miombon'antoka amin'ny fizahantany manerana an'i Minnesota aho mba hanome ny fampiantranoana tsara indrindra eto amin'ny firenena ary hanampy ireo mpandeha hahita ireo traikefa tsy manam-paharoa misy ao amin'ny fanjakana lehibe misy antsika."